Faayinaansii ala-ergii Dhala irraa Bilisaa - Oromia International Bank
Tajaajila faayinaansii daldalaa dhala irraa bilisaa, Tajaajila daldalaa ta’ee sharafni biyya alaa yeroo galu tilmaamni gatii bittaa(buying) tilmaamamee ta’a.
Tajaajila faayinaansii Advance against Sales Contact 70% irraa hanga 90% .
Tajaajila faayinaansii Advance against Export L/C hanga 90% argachuu ni danda’a
Tajaajila faayinaansii Advance against Export Bills hanga 100% argachuu ni danda’a.
Qulqulleessi raga karaa qulqulluu fi si’aayina qabuun kan raawwatamu ta’a.
Maamilli tajaajila kana bilisaan argata.
Baankiin wabummaa gaafachuu danda’a.